Aadaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 7:20 5 Adooleessa 20217:20 5 Adooleessa 2021
Indiyaatti gatiin gabbaraa waggootaaf hin daballes, hin hir’isnes - qorananoo
Gatiin gabbaraa gandoota Indiyaa waggoota kurnan dabraniif hin jijjiramne jechuun qorannoon Baankii Addunyaa beeksise.
...tti maxxanfame 7:06 5 Adooleessa 20217:06 5 Adooleessa 2021
'Jimma muka kabajaa sadiin keessummaa simata' - Abdulkariim Abbaa Garoo
Video caption: 'Jimma muka kabajaa sadiin keessummaa simata' - Abdulkariim Abbaa Garoo'Jimma muka kabajaa sadiin keessummaa simata' - Abdulkariim Abbaa Garoo
...tti maxxanfame 4:39 5 Adooleessa 20214:39 5 Adooleessa 2021
Barcuma luka sadii fi hidhata seenaa aadaa Oromoo Jimmaa waliin qabu
Barcumni luka sadii kan aadaa Oromoo, keessattuu Oromoo Jimmaa biratti akkaan beekamu yeroo dhiyoo as erga Weellisaa Galaanaa Gaaromsaa sirba isaa keessatti mul'isee dhimma falmisiisaa ta'eera.
...tti maxxanfame 4:47 2 Waxabajjii 20214:47 2 Waxabajjii 2021
Akkamiin maqaan keessan eenyummaa keessanirratti dhiibbaa akka qabaatu
Maqaan maatiidhaan isiniif mogga'e jireenya keessan irratti dhiibbaa hagamii akka qabuufi amamla keessan bocuu irratti ga'ee akka qabu yaaddanii beektuu?
...tti maxxanfame 5:37 9 Caamsaa 20215:37 9 Caamsaa 2021
Diishitaa-giinaa- Muziqaa saba Arii torbanootatti daawwattoota mil. sadi argate
Diishitaa Ginaa muziiqaa baaqqee haaraa dhiheenya kana bahe yoo ta'u, wallisaa Taariiku Gaankaasii jedhamuun sirbame. Muziqaan kunis kan sirbame afaan Arrii kan Ummattoota Kibbaa Godina Omoo keessatti dubatamuun. Diishitaa Ginaa jechuun Bara Haaraa jechuudha saba Arrii biratti.
...tti maxxanfame 4:38 4 Caamsaa 20214:38 4 Caamsaa 2021
Yeroo dhihootiin asitti dargaggoonni cidha isaaniin dura sagantaa qopheessanii jaalallee isaanii 'natti heerumtaa gaafachuun' baramaa dhufeera. Kuni sirna naqannaa isa aadaa Oromoo waliin walii maali? Akka wal fuudhan otoo beekanii 'anatti heerumtaan?' gaafachuun maaliif barbaachise?
...tti maxxanfame 5:41 25 Ebla 20215:41 25 Ebla 2021
Uluu, aadaa Oromoo namni bineeldota ajjeese ittiin gumaa baasu
Namni tokkoo yoo lubbuu dhala namaa tokko balleesse akkuma gumaa baasu, namni lubbuu bineensa ykn beeyladaa tokko balleesses aadaan ittiin gumaa baasuu jira, kunis Uluu jedhama.
...tti maxxanfame 4:23 23 Ebla 20214:23 23 Ebla 2021
Oromummaan maali, maalin ibsama?
"Oromummaan akka ilaalcha seenaa, aadaa, siyaasa fi sabboonummaa Oromootti daandii bilisummaa saaqa. Daandiin bilisummaa kun wanta Oromoon marti wal wajjin qaban irratti ijaarama" jechuun ibsan Hayyuun Oromoo.
...tti maxxanfame 5:22 18 Ebla 20215:22 18 Ebla 2021
Biyya namni taa'umsatti awwalamu beektuu?
Tanzaniyaatti bakka nami teessumaatti awwalamuu hanga Kameeruun bakka harma tokkisan- aadaa Afrikaa kan adda taʼe ilaalaa.
...tti maxxanfame 4:33 14 Ebla 20214:33 14 Ebla 2021
Oromoota Sikkoofi Mandoo biratti dubartiin deesse mallattoo ittiin dubartoota kaanirraa adda ishee baasu qabdi. Meeshaa aadaa Qanafa jedhamu adda irratti hidhatti.
Page 1 Keessaa 14